Dastuurka Cusub oo lagu ansixiey Cod aqlabiyad ah – idalenews.com
Dastuurka Cusub oo lagu ansixiey Cod aqlabiyad ah
Ergadii ansixinta Dastuurka Cusub ee uu dalka Somalia oo uu shirka uga socdey xarunta dugsiga sare ee Booliiska Xamar (Scuola Polizia) ayaa maanta cod aqlabilyad ah ku ansixiyey Dastuurka Cusub ee Somalia, taasoo horeyba shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibadaba filayeen iney sidaas u dhaceyso.
Shirkaan ayaa waxa uu si rasmi ah uga furmey Xarunta Dugsiga Sare ee Booliiska 25 July, iyadoo uu halkad galey 27 July cilad xaga farsamada. Shirka ayaa ka soo hormarey maalin ka hor waqtiguu ay dowladda kmg sheegtey in la ansixinaayo, sababo la sheegey inaysan jirin wax ay ergada shirka isku diidan yihiin , ayna haboon tahay in la dedejio oo cod loo qaado si kharashaadka iyo cabsida amniga ee jirta looga hortago. Ergada ayaa la siiyey ka hor inta aysan shirka maanta galin gunadii ay lahaayeen taasoo oo afjartey doodihii laga cabsi qabey ee shirka. Waxaana uga dambeyntii ay xukuumada oo hormuud ka aheyd socodsiinta iyo dejdejinta ansixinta dastuurka soo jeedisey in cod loo qaado, ka diba cod aqlabiyad ah ayaa lagu ansixiyey.
Waxa su’aasha dad badan oo Somali ah isweydiinayaan waxa loogu baahdey in ergo ansixisa dastuurka la keeno, iyadoo howsha shirka ay maamuleysey Wasaarada Dastuurka iyo xakuumada?
Ka qeybgalayaashada shirka ansixinta dastuurka ayaa Idale News Online u sheegey in aqoonta ka qeybgalayaashu ay ahayd mid aad u hooseysa, qaar badan ineysanba fahmaan qoraalka afka Somalia, iska daa iney qodobo dastuuri ah ka hadlaan ama fikir ka keenaane, hamiga kaliya ee ay lahaayeen dhaqaalaha yar ee loogu talagaley iney helaan. Waxayna taas aad u niyad gelisey ergadii kale ee aqoonyahanada ahaa oo aaminsanaa saxida khaladaad dastuuri ah ee ku jira Dastuurka cusub ka hor inta aan duubduub loo ansixin.
Ergada oo intooda badan aan wax dood iyo falanqeen ka yeelan, muddadii shirka uu socdey marka laga reebo guddiyo wasaarada dastuurka u qeybisey ayaa waxaa ugu dambeyntii doodii dastuurka lagu soo gabagabeeyey in uu yahay ansax.
Cabdi Jeylaani Malaaq “Marshaale” oo Muqdisho Lagu Dilay